Kushambadzira Tekinoroji: Ivo vamwe chete here?
China, January 28, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iwe unofanirwa kuve uri zvigadzirwa nyanzvi kuva mutungamiri mu Marketing? Kushambadzira uye tekinoroji zvinoita kunge zvakabatana pamusoro pemakumi maviri emakore apfuura.
Kunyangwe vanyori vanodawo kunzwisisa kuti vanhu vanoverenga sei mapeji - vachiita kuyedza kweA / B, vachiona mashandisirwo evachena, uye kuona mepu dzekupisa. Vatariri veBrand vanogovera mabhaisikopo ekushambadzira ayo akaumbwa nemapikisi upamhi, mavara akakodzera uye mazwi ekubatanidza kune iyo brand ... ese akaedzwa uye akaoneswa nehunyanzvi. Vanotungamira vatengesi vanofanirwa kunzwisisa zvine simba kudhinda uye kushambadzira kwe database
Iyi ingori mishoma yemienzaniso, asi zvinondinakidza kuti Mutevedzeri weMutungamiriri weKushambadzira munyika yanhasi anofanirwa kunge achienderana nehunyanzvi uye marekodhi emhinduro anowanikwa nehunyanzvi kupfuura zvavakaita makore mazhinji apfuura.
Ndinoyeuka ndichipinda muhofisi yeVP kamwe apo ini ndaishanda mupepanhau uye ivo ndokuti, "Chii icho chinoitwa neDatabase Kushambadzira Manager?" Iyo yaive makore angangoita gumi apfuura uye ndakakatyamadzwa! Mukuvimbika kwese, munhu iyeye ainzwisisa kusangana kweshoko, kutevedzera kunyora uye marongero emapeji… hapana chimwezve chinhu. Ivo havanawo kugara kwenguva refu…
Nepo makambani mazhinji achikura uye basa richiiswa mutsananguro yakawanda, mutungamiri weKushambadzira awedzera. Kunyangwe iyo yekutengesa yewebhu manejimendi inofanirwa kunzwisisa Search Engine Optimization, yekutsvaga injini, dhizaini, branding, kutendeuka optimization, kuteedzera kunyora, A / B yokuedzwa, analytics, kupisa mepu… Kutumidza mashoma!
Iwe uri wekushambadzira mutungamiri asingavimbe netekinoroji? Ndingafarire kunzwa dzimwe nharo kune izvi. Ini handitende kuti mutungamiri wekushambadzira anofanira kuziva hunyanzvi hwehunyanzvi hweaya matekinoroji kana maitiro ekuishandisa iwo ... vane zviwanikwa zveizvozvo. Nekudaro, kuve nekunzwisisa kwetekinoroji zvinoita kunge kunofanirwa mubhuku rangu.
Tags: klout zvibodzwaYeMahara neThebhu KushambadziraWordPress
Jan 28, 2010 pa 11: 45 AM
Kana usiri kushandisa tekinoroji muKushambadzira uri kumashure uye uchirasikirwa nekugona kukuru nemukana! Kuti kushambadzira kuve kwechokwadi, ine tekinoroji yakaenzana kutyaira mhedzisiro. Masendi angu maviri….
Ndira 28, 2010 na2: 53 PM
Hamungandinzwe ndichiita nharo ndichipesana nekunzwisisa nekugamuchira tekinoroji. Kwete. Icho chinodiwa kuti unzwisise tekinoroji uye zviumbiridzo zvinoenderana nezvose zvaunoita semushambadzi. Kana musoro wekushambadzira uye mukuru weIT asingakwanise kutaura mitauro imwechete mikana yekubudirira ichave mishoma kure. .
Ndira 28, 2010 na3: 26 PM
Chaizvoizvo unobvumirana newe, Douglas. Mark W. Schaefer akasiya iyi mhinduro pane yangu blog positi yakanzi "Darwinism & Social Media".
Nhasi, kumhanya kweshanduko kuchatsanangura nyika, vanhu uye kubudirira kwevanhu. Iko kushanduka kutsva. Ramangwana harisi revanonyanya asi nderevanonyanya kuchinjika, avo vanogona kufunga mashandisiro ekushandisa shanduko yetekiniki kukwikwidza mukana ".
Jan 29, 2010 pa 11: 15 AM
Vatengesi vanofanirwa kunzwisisa mafambiro ehunyanzvi ayo anopa meseji yavo. Asi nokutendeseka, isu tinofanirwa kugara tech agnostics: tisina kuroora kune chero chakasarudzika, tichida kushandisa izvo zvinotibatanidza kune kune vatengi vedu nhasi.